Android Application ရေးသားနည်း ~ mgkhainghtoo
Android ဆိုရင်..လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ IOS နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင်.. Android က...free ရတာများပါတယ်။ Open Source ဖြစ်တဲ့အတွက်..စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ Android application ရေးသားနည်းကို..အပြင်မှာဆိုရင်.. သိန်းချီပေးပြီး..သင်တန်းတွေတတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့.. မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်.. သိသလောက်ကို..ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ညီမလည်း..စာအုပ်တွေပဲဖတ်ပြီး..လေ့လာနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ Android Application ရေးနည်းမပြောခင်..အရင်ဆုံး Android အကြောင်းကို..မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Android ဆိုတာ..ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများအတွက်... ဦးတည်ပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားသော ၊ အများနားလည်လွယ်ပြီး..မည်သူမဆိုယူသုံးနိုင်သည့်.. Open Source Platform တစ်ခုပါ။ Android ကို Google မှပြည့်စုံသည့်အဆင့်ရောက်အောင်.. မွမ်းမံပြီး.. Open Handset Alliance ( OHA ) မဟာမိတ် အုပ်စုမှ..ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ OHA ၏ရည်ရွယ်ချက်က.
. wireless device များကို..ပိုမိုဆန်းသစ်ရန်နှင့်.. အသုံးပြုသူများအား..ပိုမိုစုံလင်ပြီးဈေးသက်သာသည့်.. wireless device များဖန်တီးပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ Android သည် Linux ပေါ်တွင်..အခြေခံထားပါသည်။ Linux ပေါ်တွင်အခြေခံရခြင်းမှာ.. ပေ့ါပါးခြင်း ၊ portability ၊ လုံခြုံခြင်း security နှင့် features စုံလင်မှုတို့ကြောင့်ပါ ။
Android Application ရေးသားဖို့အတွက်.. Software ၃ မျိုးလိုပါတယ်။
1. Java SE SDK
Java SE SDK Installation
- ပထမဦးစွာ.. Java SE SDK က..မိမိကွန်ပျူတာထဲတွင်ရှိမရှိကို..စစ်ဆေးရပါမယ်။
- Run > cmd ဖွင့်ပြီး java လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ ရှိရင်တော့.. Java ရဲ့ version အကြောင်းကျလာပါလိမ့်မယ်။
- " java is not recognized as an internal or external command " ဆိုရင်တော့မရှိလို့ပါ။
- Java SE SDK မရှိရင်.. ဒီနေရာမှာဒေါင်းပါ
- download ဆွဲလို့ရလာရင်..အဆင့်ဆင့် run ပါမယ်။ Next တို့ Finish တို့နှိပ်ရုံပါပဲ။
သိပ်မခက်လို့.. run ပုံ run နည်းကို..မရှင်းပြတော့ပါဘူး..။ ^_^
Android SDK Intallation
Android SDK သည် Android Platform ပေါ်တွင်... Application များရေးသားလိုသူ Developer များအတွက်..အလွန်အသုံးဝင်သော.. software ဖြစ်ပါတယ်။ Android SDK တွင် နမူနာ project များ ၊ Source Code များ ၊ Development Tool များ ၊ Emulator ခေါ် window ပေါ်တွင် Android ဖုန်းကဲ့သို့အသုံးပြုနိုင်သည့်..ဖုန်းပုံစံငယ် နှင့် Android Application များတည်ဆောက်ရန်အတွက်.. လိုအပ်သော Libraries များပါဝင်ပါတယ်။ Java SE SDK ကို install မလုပ်ထားပါက.. Android SDk ကို install လုပ်ချိန်တွင်.. Warning Message နှင့် Error Message များကို..တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ Java SE SDK ကို install လုပ်ပြီးမှ.. Android SDK ကို install လုပ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
- Android SDK ကို ဒီမှာဒေါင်းပါ
- ရလာရင် double click နှိပ်ပြီး run လိုက်ပါ။
- Welcome to the Android SDK Tools Setup Wizard လို့ပေါ်လာရင် Next ကိုနှိပ်ပါ။
- Choose User နေရာမှာ.. ကြိုက်တာပေးပါ။
- Choose Install Location နေရာမှာ C:\_User\_user\_AppData\_Local\_Android\_android-sdk လို့ပေးပြီး Nextကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
- Install > Next > Finish ဆိုရင် Android SDK ကို.. install လုပ်ပြီးပါပြီ။
IDE (Integrated Development Environment) ဆိုသည်မှာ Software တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် Development လုပ်လိုသော computer programmer များအတွက်… နားလည်လွယ်သော ၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော.. high level comprehensive facilities များကို..စုစည်းထားသော Software Application တစ်ခု (သို့) User Interface တစ်ခုပါ။
11. Source Code Editor
22. Build Automation Tools နှင့်
33. Debugger ဟူသောအစိတ်အပိုင်း သုံးခုပါဝင်ပါတယ်။
- အရင်ဆုံး Eclipse IDE ကို download ဆွဲလိုက်ပါ။ (Eclipse IDE for Java EE Developers ကိုဒေါင်းပါ)Download Here
- Download ဆွဲလို့ရလာတဲ့ file က zip လုပ်ထားရင်.. Extract လုပ်ပါမယ်။
- Extract လုပ်လို့ရလာတဲ့ file ကို D:\_ အောက်တွင် AndroidApp ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါ။
AndroidApp folder အောက်တွင်ထည့်လိုက်ပါမယ်။
- ပြီးရင် eclipse.exe ကို run ပါမယ်။
- Android Application များကို Eclipse IDE မှ..တစ်စုတစ်စည်းတည်း.. သိမ်းဆည်းရန်အတွက်.. Workspace Location ရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
- ထို့ကြောင့် D:\_AndroidApp\_ အောက်တွင် AndroidWorkspace ဆိုပြီး folder တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါ့မယ်။
- Workspace Location ကို Browse ထဲမှ.. D:\_AndroidApp\_Workspace ကိုရွေးပေးရပါမယ်။
ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်တော့.. Eclipse IDE ကို…အောင်မြင်စွာ Install လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Eclipse IDE ကို Install လုပ်ပြီးရုံဖြင့်..ရေးလို့မရသေးပါဘူး။ Android emulator ကို..ထည့်ရပါမည်။
အရင်က..အပိုင်း ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ကို..ရကြမယ်လို့တော့..ထင်ပါတယ်။
Install New Software in Eclipse IDE
Android Application ရေးဖို့အတွက်.. Eclipse ထဲကို..ထည့်ရမယ့်အရာတွေရှိပါတယ်။
1 1. Android SDK Repository for Eclipse (1.5 to 4.0) // download link ကို install လုပ်သည့်အပိုင်းမှ..တင်ပေးပါ့မယ်။ zip လုပ်နေတာမပြီးသေးလို့ပါ L file size က3GHz ကျော်ကျော်ရှိလို့ပါ….
2. ADT-16.0.0 ( zipped files ) Download Here
တို့ကို.. D:\_AndroidApp အောက်သို့ copy ကူးပြီးထည့်ထားပါ။
- Eclipse IDE ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။
- Help > Install New Software ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
- Install window ပေါ်လာလျှင် Add button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Archive ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး.. window ပေါ်လာပါက.. ခုနက download ဆွဲပြီးထားထားတဲ့… ADT-16.0.0 (zip file ) ကိုရွေးလိုက်ပါ။
- Name နေရာတွင် Android ADT လို့ပေးလိုက်ပါမယ်။
- ပြီးရင် ok ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။
- Developer Tools အားလုံးကို..အမှန်ခြစ်ခြစ်ပြီး… Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
- Install လုပ်နေပါလိမ့်မယ်…..
- ပြီးသွားလျှင် Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ…
- “ I accept the terms of the license agreement “ ကိုရွေးပြီး.. Finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..။
- Computer ၏ Speed ပေါ်မူတည်ပြီး…အချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်…
** အခုလို install လုပ်နေချိန်တွင်.. Internet Acess ရနေလျှင်.. ပိတ်ထားသင့်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုရင်..internet ရနေလျှင်.. install လုပ်နေချိန်တွင်..
Error message များကျလာနိုင်ပါတယ် **
- Installation ပြီးဆုံးသွားပါက.. Eclipse IDE ကို.. Restart ချခိုင်းပါလိမ့်မည်။ Ok ကိုနှိပ်ပြီး.. restart ချလိုက်ပါ။
- Eclipse IDE ပြန်တတ်လာချိန်တွင်.. Workspace Location ကိုပြန်ရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်..။
- အရင်တစ်ခါကလိုပဲ.. D:\_AndroidApp\_AndroidWorkspace ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
- အခု.. Eclipse IDE ၏ Android Preference များကို.. Configure လုပ်ဖို့..အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ..။
- Configure လုပ်နည်းကို..နောက်ရက်..ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်..။
Posted in: Android Application ရေးသားနည်း